रजित ओझा - Rajit Ojha Archives - Page2of2- साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय | Page 2
कथा : उसका कुरा
~रजित ओझा~ “तिमीलाई एक महिनाको लागि छोडेर हिँड्दिन्छु अनी थाहा पाउँछ्यौ!” “त्यो मेरो जीवनको सवैभन्दा सुन्दर महिना हुनेछ!” उसको कर्के आँखा, रिसाएको रातो अनुहार देखेर म कटाक्ष गर्छु। मलाई थाहा छ उ मलाई छोडेर जान्न, कतै जान्न !!! उ खाना … Continue reading →
कथा : हेलिकप्टर
~रजित ओझा~ उसलाई आजकल यो शहर प्रत्येक दिन नौलो लाग्न थालेको छ। कति धेरै काम भएको ! प्रत्येक दिन भित्तामा सार्कको छाप देखिन्छ। अनि आउन लागेका मोदिको आधिपत्य पनि।विचरा कलिलो उ कसरी वुझोस् यि कुरा, मात्र कुदिरहेको गाडीको ढोकावाट हेर्छ … Continue reading →
कथा : एउटा अपराध वोकेर भाग्दैछू
Posted on December 18, 2014 by Sahitya - sangrahalaya
~रजित ओझा~ तिमी आउँछौ थाहा छ, तर एउटा अपराध वोकेर भाग्दैछु। कालो चश्मा लगाएर तिमी उकालो चढ्दै थियौ। धेरै तल देखी मैले तिमीलाई नियालेकी थिएँ। अग्लो कद,पुलिसको जस्तो कपाल,कालो चश्मा अनि गह्रुंगो झोला।आँगनमा तिमीले विसाउँदै सोध्यौ “पानी पिउन मिल्छ?” मैले … Continue reading →
कथा : माया…..
Posted on November 7, 2014 by Sahitya - sangrahalaya
~रजित ओझा~ कसैले उसको कानमा खुसुक्क भनेको जस्तो लागेको थियो उसलाई , आज आकाशमा कालो सुर्य उदाउनेछ । उसले धेरै बेर आकाश नियाल्न खोज्यो तारा हरु शित झार्दै थिए उसको आँगनको घाँसमा , उसको ओइलिएको आँगन शितले सिँचेर हरियो बनाइदिने … Continue reading →
~रजित ओझा~ मेरो अगाडी एउटा टेबल थियो कामिराखेको गोडाहरू लुकाउन , अनी भुईमा रखियेको बिदेशी कार्पेट ले मेरा औला हरु कोतर्न ब्यस्त थिए । म मेरो मोजा गनाई रहेको छ/छैन, त्यस्प्रती पनि सतर्क थिए । कोठा शांत थियो, मौनता पल … Continue reading →
कथा : भिँडभित्रको एउटा दिन
Posted on September 12, 2014 by Sahitya - sangrahalaya
~रजित ओझा~ मेरो कोठाको पंखालाई फेरि मैले पुलुक्क हेरेँ उ अनन्त गतिमा घुम्दै नै थीयो । उ गल्दैन जवसम्म उसको मालिकले उसलाई अराउँछ जवसम्म उ धर्म निभाउन सक्छ उसले आफ्नो धर्म निभाउँछ । उ कर्तव्य बाट टाढिँदैन , उ सँग … Continue reading →
कथा : आत्मा उज्यालो माग्दै थियो
~रजित ओझा~ “कति हेर्छस् त्यहि मोरीको फोटो ,यसो उसो गर्यो पर्स निकाल्यो त्यहि फोटो हेरि हाल्यो । यतिन्जेल सम्म त परिवार नियोजन नगरेकी भए चारवटा छोराछोरीकी आमा भइ सकी होली ।” गेट पारीको बङ्करमा ड्युटिमा बसेको हर्केले मैले पर्स झिकेको … Continue reading →
कथा : बौलाहिको बिहे
~रजित ओझा~ धनकुटा बेलुकि ५ बजे चुवा बोटमाँ चिया खाँदै गर्दा मैले फेरि देखे त्यसलाई ,एकदमै घिनलाग्दी ,नारी भन्न पनि असुहाउँदि ,जुम्रा परेकाले होला कपाल कन्याइरहेकी थीई ,नकन्याओस पनि किन?त्यस्तो खस्रो कपाल बालुवाको कण परै बाट देखिन्थे कपालमाँ ,ननुहाएको धेरै … Continue reading →
कथा : आशा दिदी
Posted on September 1, 2013 by Sahitya - sangrahalaya
~रजित ओझा~ म पात्रमा नायकत्व कति जरुरी छ ? मेरो कलमले अघि बढ्दाबढ्दै गहिरो प्रश्न राखेको थियो। म सोच्न बाध्य भएँ, किनकि यदि जरुरी छ भने जे म लेख्दैछु त्यो कथा होइन। ममा नायकत्व छैन।